महिना: डिसेम्बर 2018
रक्सी र क्यासिनो जुआ
डिसेम्बर 28, 2018 समाचार
कुनै पनि जुआ कोसिनो कहिले काँही कैसीनोमा पाउन सकिन्छ, र यो फरक वा फरक छैन भने यो वास्तविक वा भर्चुअल हो। जुआ घरहरू लोकप्रिय भएका छन् जब जुआलाई जित्न सकेसम्म रमाइलो हुन्छ र, यदि तिनीहरू भाग्यमानी हुन्छन् भने एक राम्रो अतिरिक्त आय प्राप्त गर्दछन्। एक क्यासिनोमा हरेक जुआले एउटा खेल पत्ता लगाउन सक्छ जसले उसलाई मौकाको संसारमा डुबाउन मद्दत गर्नेछ। जुआलाई पूर्णरुपमा आराम गर्न अनुमति दिईयो क्यासिनोले ग्राहकहरूलाई विभिन्न प्रकारका कडा पेयहरू प्रदान गर्दछ। तर प्रत्येक जुआले आफैलाई सोध्दैन, "जुआ घर प्रशासनको उद्देश्य के हो?" सम्भवतः, जवाफ सरल छ: क्यासिनोको पक्षमा खेल परिणाम परिवर्तन गर्न। तपाईं यस लेखबाट खेल परिणाममा रक्सी कसरी असर गर्नुहुन्छ सिक्न सक्नुहुन्छ।
जुआ मा बस्नु भएको एक व्यक्ति पहिले देखि नै नशे बाट पक्का हुन सक्दछ कि, वास्तव मा, उहाँ पहिले देखि नै छ हराएको उनको पैसा। अर्को शब्दमा, एक व्यक्ति जसले जोखिम लिने डर नदिई र अधिकतम शर्तले रणनीतिहरू पछ्याउँदैन जसले पैसा गुमाउने मौका कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, व्यक्तिको मुख्य कार्य कैसीनोलाई हराउनु हो, भले ही उनले सबै प्रारम्भिक राजधानी खर्च गर्दछ वा पैसा तिर्छन्। निस्सन्देह, यस्तो व्यवहारबाट क्यासिनो प्रशासनले फाइदा पाउनुको साथै, जुआलरले पेय पदार्थलाई जित्छ, त्यो बढी जोखिम र गुमाउँछ। यसैले, कैसीनोले यसको सक्रिय र धनी दर्शकहरु द्वारा शराब उपभोग लाई रोक्न सक्दैन। अनलाइन मानसिक रीडिंग.
लगभग हरेक जुआ सम्झना जुवाको सुरुवात गर्न सक्थ्यो र भाग्यमानी थियो पैसा कमाई। तर जब जुआ पीर्यो, त्यो भाग्य कहीं बाँकी छ, र उसले घर फर्किएको थियो। त्यहाँ मानिसहरू जो जुम्ल्याहा टेबलमा सजिलै एक गिलास बिना कठिन पेय कल्पना गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा तिनीहरू धेरै पैसा गुमाउन र मूर्ख देख्न छोड्न तयार हुनुपर्छ।
बिन्दु शराबले जुआको ध्यानलाई कमजोर पार्छ। एक शंकु व्यक्तिले खेल प्रक्रिया राम्रो तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैन र जाँच गर्नुहोस् कि सहभागीहरूले सबै नियमहरूको पालन गर्दछन्। यसबाहेक, कडा पेयहरूले प्रभावलाई अनुमति दिँदैन व्यक्तिले आफ्नो गल्तीहरूको विश्लेषण गर्न भविष्यमा तिनीहरूलाई बचाउन।
निस्सन्देह, जुआ घरहरू चाहन्छन् कि खेलाडीले उनीहरूको सबै पैसा छोड्न चाहन्छन्; यही कारणले ग्राहकहरूले अल्कोहल प्रदान गरेका छन् जसले तिनीहरूलाई मद्दत गर्दछ र खेलमा नियन्त्रण गुमाउँछ। प्रत्येक जुआ, चाहे एक प्रारम्भिक वा एक पेशेवर हो कि, समाप्ति गर्नु पर्छ कि कडा पेय खेल खेल सँग मिल्दो छैन। यदि एक जुआ घरलाई हराउन चाहानुहुन्छ भने त्यहाँ त्यहाँ "टिपी" आउन वा हार्ड पेय पेन्डिङ गर्नु हुँदैन। केवल एक सरल व्यक्तिले खेलकुद सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न सक्दछ र आफ्नो गल्तीहरू उचित रूपमा सच्याउन सक्छ।
सम्झनुहोस्, तपाईंलाई खेलको समयमा "कुनै" शराबमा भन्नुपर्दछ!
बिग विन क्यासिनो भिडियोहरू
सम्बन्धित कैसीनो समाचार
आईए पोकर - कसले जित्छ?
जुन 18, 2019 / स्पिन महल समाचार र कैसीनो बोनस
वेब डिजाइनको इतिहास
जुन 18, 2019 / जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
क्यानाडामा अनलाइन क्यासिनो खेल उद्योग
अजीब कैसीनो बोनस कहिल्यै
अनलाइन ब्ल्याक जैक प्ले गर्नको लागि शीर्ष सुझावहरू
अनलाइन ब्ल्याक जैकमा कसरी विजयी हुन सक्नुहुन्छ?
क्यासिनो वर्जिनका लागि शीर्ष गेमिङ युक्तिहरू
जुन 18, 2019 / Casino.com समाचार र क्यासिनो बोनस
छिटो र मजा - किन केनो एक मनपर्छ
क्रिस्टल पैलेस0-0Everton
जुन 19, 2019 / जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
गेमिंग लतको उपचार
गेमिङ लत (लुडोमेनिया वा जुआ) जुवाको लागि अनियन्त्रित र अनियन्त्रित भोकमा प्रकट मनोवैज्ञानिक निर्भरता को एक प्रकार हो। यो भावनात्मक विकार अन्ततः अवसादको नेतृत्व गर्दछ।
सभ्यता, इलेक्ट्रोनिक्स र जुआको विकासले प्रलोभनको अनन्त संख्याको जन्म र द्रुत संवर्धनको भ्रामक तरिका जन्मायो। धेरै व्यक्ति जुआ लिन थाले र तनाव त्यागेको मौका र आफ्नो आर्थिक परिस्थितिमा सुधार गर्न थाले। तर यो पनि बिना देखाउँदै, उनी जुआ खेल्दै आएका थिए र उनीहरुलाई एक खराब चक्रमा फेला पारे, लगभग कुनै बाटो पत्ता लगाउने सम्भावना थिएन।
कुनै पनि लत जस्तै जुवा धेरै चरणहरू छन्। सबै कुरा एक सामान्य र प्रतीत भई हानिकारक इच्छा जुवा गर्न सुरु हुन्छ। तथापि, समय सकिनै, जुआलरले यस इच्छालाई अझ धेरै पूर्ति गर्न आवश्यक छ। मूलतः, उहाँले अझै जुवाको कारणले कुनै मानसिक तनाव महसुस गर्नुहुन्न, र यसले उहाँलाई जस्तै हानिकारक चन्द्रमा जस्तो देखिन्छ।
तर चाँडै यो जुआको इच्छालाई रोक्न अझ गाह्रो हुन्छ। जुआको लागि अनावश्यक भोकर छ, र जुआ हासिल गर्न पछि पनि रोक्न सक्षम छैन। फलस्वरूप, सबै पैसा हो हराएको, र धन को कमी केवल अस्थायी रूपमा जुआबारी रोक्न सक्छ। हानिको बावजूद उनी दृढतापूर्वक विश्वास गर्छन् कि उनी निश्चित रूपमा यो फिर्ता लिने र ठूलो पैसा कमाउनेछन्, र यसैले, बढ्दो उत्साह संग जुवा जारी छ।
माथि उल्लेखित चरण अर्कोको पछि लागी, जुआ को बारे मा विचार जब जुआलर को जीवन को सबै भन्दा उपभोग गर्दछ। जुआ एक असीमित व्यक्ति बीचको बिचमा पैसा लिन पैसा खोज्ने प्रयास गर्दा, रिटेलले आफैंबाट असीमित बोर्यो, सम्पत्ति बेच्न वा क्रेडिटहरू खरिद गर्दछ, तर पोषित रकम प्राप्त गरिसकेको छ, उसले तिनीहरूलाई फेरि गुमाउँछ। अपेक्षित लाभ बिना उसले पागल हुन सक्छ। यस चरणमा, कसैले कुनै पनि समयमा गम्भीर अवसादमा पत्ता लगाउन सक्छ।
जुवा लतको उपचार एक जटिल र लामो प्रक्रिया हो। मानसिक बोनस विभिन्न विशेषज्ञहरू र प्रशिक्षकहरू एक ठूलो काम गर्दैछन्। सबै उपचार एक रोगी वरपर बनाइयो र एक बाहिरी आधारमा गरिन्छ। बिरामीको चेतना र जीवन प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्न विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग, साथसाथ जुआ को लागि भूख देखि छुटकारा पाउन चिकित्सक लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न र दुबई गेमिंग लतबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ।
मनोचिकित्सा गेमिंग लत को उपचार को मुख्य र अपरिहार्य तरीका हो। संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार मा प्रयोग गरियो
मानसिक बोनस बारम्बार रोगीहरुमा लत उपचार मा यसको दक्षता साबित भएको छ।
एक मनोचिकित्सक संग काम गरेर रहेको प्रक्रिया मा (यो सबै उपचार कोर्स ले लिया जान्छ) एक रोगले उनको विश्व दृश्य को पूरी तरह बदलता छ, र अधिक महत्वपूर्ण, उनको स्वयं को समस्या को रवैया: उनले विनाशकारी प्रभाव को बारे मा शुरू गरे कि गेमिंग लत आफ्नो जीवन मा ।
यदि निदानले अवसाद सहित कुनै पनि गर्भनिरोधक मानसिक विकार पत्ता लगाउँदछ भने, मनोचिकित्सा प्रारम्भिक रूपमा विकारहरूको सम्पूर्ण जटिलताबाट हटाउनुको उद्देश्य हो।
जुवाले जुवा उत्तेजित हुने कारणहरू हटाउन सिक्दछ, तनावपूर्ण परिस्थितिहरूमा आत्म-नियन्त्रणको तरिकाले परिचित हुन्छ र अधिक आशावादी र सकारात्मक व्यक्तिहरूको साथ नकारात्मक विचारहरुलाई बदल्दछ।
5 ट्रिक्स कि क्यासिनो सुरक्षित राख्नुहोस्
के तपाईंको मालिक धेरै जान्दछ?
आभासी घोडा दौड अब एक वास्तविकता
लास वेगास को रिजर्विंग
सबै परम्परागत र चिपचिपा बोनसहरूको बारेमा
नयाँ स्लॉट खेल बजाउँदै - लारा क्रफ्ट®: मज्जाहरू र टम्ब्स ™
रूले को संक्षिप्त इतिहास
लाइव क्यासिनो प्रो:7रहस्य प्रकट
ब्ल्याक जैक रणनीति र चिप्स
डिसेम्बर 11, 2018 समाचार
ब्ल्याक जैक गेम
कसरी प्रविधि धोखा दिने हो
अब लाखौंले आधा विश्वको धन नियन्त्रण गर्छ
अनलाइन स्लॉट सुविधाहरू संग Grips मा जानुहोस्
Microgaming को संक्षिप्त इतिहास
रियल पैसा बनाम नि: शुल्क प्ले
केही सामान्य गल्तीहरू ब्ल्याक ज्याक नोभेम्बर बनाउनुहोस्
अजीब फैशन बयान र रुझान
कैसीनो स्लॉट मिसिनहरु मा जीत र एक तरिका को छोड दो - मुफ्त स्लॉट खेल र असली मुद्रा जीतयो
डिसेम्बर 10, 2018 समाचार
यो क्यासिनो स्लट मिसिनहरूमा सँधै राम्रो हुन्छ। यी खेलहरूमा जित्ने धेरै व्यक्तिहरूले खेल्ने खुशी पाउँछन्। क्यासिनो स्लट खेलमा जित्नको लागि सही पल मा छोड्ने बारे जान्न धेरै धेरै छ। केही स्लॉट खेलाडीहरूको लागि, छोटो समय छोड्नको लागि जब तिनीहरू आफ्नो हानि पुग्छन् वा जीत सीमामा पुग्छन्।
हो। प्रत्येक स्लॉट खेलाडीले आफ्नै हानिलाई जित्न वा जीत सीमालाई उनीहरूले आफ्नो माध्यम भित्र प्ले गर्न अनुमति दिन्छ। धेरै खेलाडीहरू प्राय: प्ले गर्नका लागी एक गल्ती छ किनभने तिनीहरू विजेता लकीरमा छन्। यस प्रकारको जोखिम लिनु राम्रो हो। तर, यो पनि कुल हानि हुन सक्छ। ध्यान दिनुहोस् कि केहि स्लॉट मिसिनहरू छन् जुन तपाईले धेरै पटक जित्नुहुनेछ र अचानक तपाईले तपाइँको बैंकको ठूलो मात्रा गुमाउनुहुनेछ।
तपाईं केवल आफ्नो सीमा खेल भन्दा पहिले सेट नगर्नु हुन्छ, तर तपाईं यसलाई लिनु पर्छ। जब तपाइँ आफ्नो सीमा पछ्याउनुहुन्छ, तपाई निश्चित रूपले राम्रो लाभ वा तपाईंको लागि सहज योग्य हुने एक हानि संग घर जानुहुन्छ। त्यसैले, यदि तपाईंसँग छ हराएको धेरै पटक, त्यसपछि दिनको लागि खेल रोक्नुहोस् र खेल्नको लागि केही अन्य समय बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईं क्यासिनो स्लट मिसिनहरूमा जित्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाइँले आफ्नो सीमा सीमा पुग्दा बजाउन रोक्नुहोस्। यो बजाउने अर्को स्लॉट खेलाडिहरू भन्दा अघि तपाईले खेल खेल्नुहुनेछ जुन त्यहाँ कुनै कल छैन जबसम्म उनीहरूको पैसा बाँकी छैन।
जब तपाइँ स्लट खेलहरूमा जित्नुभयो, तपाइँलाई प्रोको रूपमा छोड्नै पर्दछ। यो छाप बनाउनको लागि, तुरुन्तै तपाइँको टिकटहरू तुरुन्तै नगद बाहिर। अधिकांश क्रेडिट स्लपहरू समाप्ति मितिहरू छन्। यदि तपाइँ समाप्ति मितिमा वा तपाईंको सबै क्यासिनो पर्ची नगद नगर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँ सबै आफ्नो विनि गुमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ अब खेलको लागि मूडमा हुनुहुन्न वा तपाईं थकित हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै नगद बाहिर जानुहुन्छ र आफूलाई धेरै पैसा गुन्न नहुने सम्म खेलको प्रलोभनमा आफैलाई अनुमति नदिनुहोस्।
स्लॉट मिसिनलाई कसरी हराउन र जित्न कुनै सही रणनीति छैन। तपाईं उत्कृष्ट भुक्तान गर्ने मशीनहरू चयन गरेर मात्र आफ्नो सम्भावना बढाउन सक्नुहुन्छ र बेशक तपाइँ छोड्न र सही पल खेल खेल्न र जब तपाईं आफ्नो सीमा पुग्नुहुन्छ।
प्ले गर्दै कैसीनो स्लट्स वास्तवमा मजा हुन सक्छ। तर, सबैले सम्भवतया यो कुरा स्वीकार गर्दथ्यो कि तपाई अब कैसीनो बाट बाहिर जाने बित्तिकै यो मजा हुनेछैन। यही कारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ अगाडि स्लट मिसिनमा जित्नु अघि जित्नुको जोखिममा स्तर पहिचान गर्न र तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने हराउनु भयो। तपाईंले आफ्नो हानि पुग्नु भएको छ र सीमा लिनु भएको बेला आफैलाई खेलमा झुकाउन नदिनुहोस्। यो गर्ने वास्तवमा तपाईलाई यति धेरै बैंकल बायाँ दिनेछ ताकि तपाई अझै पनि अर्को दिनमा स्लट मिसिनहरूमा प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। जुआमा, सधैँ एक समय गुमाउन र कैसीनो स्लट मिसिनमा जित्ने समय हो खेल.
तपाइँको मोबाइल कति सुरक्षित छ?
21st शताब्दी मा संगीत संग पैसा बनाउन
प्रो पोकर मा सबैभन्दा सफल महिलाहरु
महत्त्वपूर्ण रूले सर्तहरू
रोनाल्डो नियम इन्स्टाग्राम!
किन मोबाइल क्यासिनो खेलहरू माथि छन्
VLTs के हुन्?
eSports बेटिंग को वर्णन
के अन्तराष्ट्रिय कप्तान अमेरिकाको अन्त हो?